Top 10 4k TV'yada, kuwaas oo mid ka mid idiin tahay Khayr
4K waa technology ugu dambeeyay ee xal ayaa loo soo bandhigay ee suuqa si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay in arrintan la xiriira. Pixels waxaa ay ballaarisey iyo afaysto marka ay timaado ugu fiican iyo state of technology tahay in arrintan la xiriira. Tutorial Tani waxay ku saabsan xallinta 4K iyo qalabka la xiriira oo dhan.
Top 10 4K telefishannada
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in 4K waa technology ugu dambeeyay oo ugu wanaagsan oo uu soo bandhigay ee suuqa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay ayaa waxaa sidoo kale raacay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in 4K TV la sameeyo sameeyo. Ka dib waa uu kaalinta ay uqaabeeyaan arrintan la xiriira.
a. Teknoolajiyada Older
Si loo fahmo wax soo saarka ee ay tahay in la xuso in user waa in marka hore la ogaado in qoraalkii hore ee TV'yada HD lahaa xal ee 1920 pixels in ilaa dhigay sawirka arrintan la xiriira. Pixels More ka dhigan tahay image af badan
b. Qaraarka Sare
Waa in la ogaadaa in technology 4K ayaa kaliya Laab xallinta pixel guud ee TV-ga ie 3.840 oo ku dhow yahay inuu 4000 oo sidaas daraaddeed technology ee loo yaqaan technology 4K iyo sanamkii sidoo kale soo bandhigay waa ugu fiican iyo kan gobolka ee tahay in arrintan la xiriira.
c. Iskaanka taagan
The khadadka toosan ee hore HD TV'yada ahaayeen 1080p oo uu soo korodhay in 2160p ee arrintan la xiriira. Tani waxay sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in sawir guud ahaan iyo xallinta guud ahaan ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
Ka dib waa 10 telefishin in ay tahay in la tixgeliyo ee la xiriira arrintaas la xiriirta technology 4K ah.
1. 79 "Class (78.5" Wanqaar) 2160p Smart w / webOS 3D Ultra HD 4K TV
4 xallinta, guddi IPS, Tru 4K Engine pro, decoder HEVC.
TV Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo kuwa ugu qaalisan oo uu soo bandhigay by LG ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in alaabta la joojin doonaa sida ugu dhaqsaha badan si iibka waa in ay ka dhigay sida ugu dhakhsaha badan si aad u hesho tayada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
URL Product page
Number of iibka ee 2014 , 50,000 oo
2. 65 "Class (64.5" Wanqaar) UHD 4K Smart 3D LED TV w / webOS
AN-VC 500 Camera, 2.1 nidaamka Gudoomiyaha, 35W saarka audio iyo 6 hab dhawaaqa.
Wax soo saarka ugeeyaan kale oo uu soo sameeyo LG ee foomka of TV in la kor ku xusan. Waa mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan 4K aaladaha in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in arrintan la xiriira ka dhigi lahaa iyo sidoo kale helo raali guud ahaan in aan la heli karin meelo kale.
Number of iibka ee 2014, 54,000
3. 55 "Class (54.6" Wanqaar) 2160p Smart w / webOS 3D Ultra HD 4K TV
AN-VC 500 camera, app fog, browser file network, screnshare, WiDi
Waa mid ka mid ah telefishannada in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay la raacay halka horumarka la sameeyey arrintan la xiriira ka dhigi lahaa. Waxaa kale oo TV ah oo bixiya la soo saarka ugu wanaagsan ee dhammaan foomamka user u baahan tahay.
Number of iibka ee 2014, 73,000
4. 49 "Class (48.5" Wanqaar) 2160p Smart w / webOS 3D Ultra HD 4K TV
AN-VC 500 camera, nidaamka Gudoomiyaha 2ch, 20W saarka audio iyo Dolby decoder digital
Wax soo saarka ayaa hubaal arkay xaami ah ka mid ah in la soo sheegnay oo dhan iyo waa ay sabab u tahay qiimaha macquulka ah iyo sidoo kale arrimaha guud oo la qabto shirkadda duwan lagu daydo hore. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ayaa sidoo kale ka heli kartaa ugu fiican marka TV waxaa laga soo iibsaday ganacsade idman.
Number of iibka ee 2014 , 80,000 oo
5. X950B TV la 4K Resolution
Backlight LED, 16: 9 arrin ratio, 1million ratio duwan oo firfircoon, Triluminous bandhigay
Oo weliba wax soo saarka kale cajiib ah oo uu soo bilowday Sony arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxa lagu qeexaa in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in dib u eegista ayaa waxaa sidoo kale lagu hor akhriyey alaabta la soo iibsaday sameeyo.
Price : $ 5499
Number of iibka ee 2014 , 64,000
6. X940C / X930C 4K HD Ultra la TV Android
4K aalladda HD, 4K processor X1, audio xal sare, TV Android
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka of farshaxanka 4K TV oo hubaal waa inuu xaqiijiyo in kursiga kasta oo guriga uu noqonayaa mid ka mid ah ugu wanaagsan. Technology ayaa gundhig u fiican oo isku mid ah ayaa sidoo kale lagu sawiray dib u eegista user arrintan la xiriira.
Number of iibka ee 2014, 29,000
7. X910C / X900C 4K HD Ultra la TV Android
Baytariyada xadhig awood AC, blaster IR, xallinta Super 3D, bandhigay af Multi
Sida dib u eegista user waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo state of telefishanka tahay in la hubiyo in heerka ku qanacsanaanta user la kulmay hab ugu wanaagsan u samayso. Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in xalka ugu wanaagsan waa la hubaa in arrintan la xiriira.
Number of iibka ee 2014, 45,000
8. X850C 4K HD Ultra la TV Android
Blaster IR, 4K processor X1, 54,6 aragtida dadab, 4k aalladda HD
Mar kale Sony uu ka sarre maray oo dhan ee ay xafiiltamaan ay tahay in la abuuro TV in uu yahay ka ugu fiican iyo gobolka of farshaxanka arrintan la xiriira. Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo habka guud ee loo raaco hab loo arkaa in ay sida ugu fiican ee jeer oo dhan.
Price : $ 1.499
Number of iibka ee 2014 , 72,000
9. X830C 4K HD Ultra la TV Android
4K xaqiiqada x pro, TV android, iftiinka dib LED, X1 processor 4K
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo tayada sawirka guud waxaa sidoo kale soo hagaagtey tan la eego dhigi lahaa. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in user la cafiyo marka ay timaado raadinta tayada.
Number of iibka ee 2014 :> 100,000
10. X810C 4K la TV Android
RMT-TX100U hago, gacanta waalidka, bandhigay afka kala duwan, 10W x 2 saarka audio.
Waxaa la odhan karaa waa TV dhaqaale in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in arrintan la xiriira iyo warbaahinta oo idil waxaa ay gacanta ku fadhiya sariirta ka dhigi lahaa. Waxaa shaki la'aan waa mid ka mid ah telefishanka ugu fiican ee jeer oo dhan.
Number of iibka ee 2014: > 200,000
> Resource > Video > 10 4k TV'yada, kuwaas oo mid ka mid khayr idiin ah?